ဂုဏ်ပြုခွင့်ပေးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂုဏ်ပြုခွင့်ပေးပါ
Posted by ထွန်း ပြောင် on Sep 20, 2012 in Copy/Paste | 32 comments
ယခုဆိုလျှင် ၂၁ရာစုသို့ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်မှာ ၁၁ နှစ်ခွဲကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်…..
ကမ္ဘာတစ်ဝမ်းလုံးတွင် မရေမတွက်နိုင်သော တိုးတက်မှုများလည်းကြုံတွေ့နေရသလို တိုးတက်မှု၏အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း
ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ပေးဆပ်မှုများ အများအပြားရှိနေလိမ့်မည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်………
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသန်းပေါင်းများစွာ အသုံးပြုနေကြသော အင်တာနက်သည်လည်း..နေ့စဉ်လူမှုဘ၀တွင်
၄င်းအင်တာနက်အား အသုံးပြုရာ၌ မြန်မာစာ. မြန်မာစကားရေးသားရာတွင် သတိမထားမိသောအမှား ၊သေချာမှားသောအမှား
နောက်ပြောင်ချင်သောကြောင့်မှားသောအမှား လေးများကို ကျွန်ုပ်ထွန်းပြောင်အပါဝင်
စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများ ကျူးလွန်မိနေကြသည်ကို သတိထားပြုပြင်နိုင်ကြစေရန်…အလို့ငှာ….
စားပြီးပြီလား = ချားပီးပီယား
မသိဘူး = မတိဝူး
မခေါ်ဘူး = မထော်ဝူး
သေပြီလား = တေဘီယား …….ဟူ၍နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မိခင်ဘာသာစကားကို ဖျက်ဆီးမိနေကြပါသည်….
မြန်မာစကားတွင် ‘’အမှားကြာ အမှန်ထင် ” ” နောက်သလိုနဲ့ အတည်ပြော ” စသောစကားများလည်းရှိပေရာ
ယခုအတိုင်းသာဆက်လက် သုံးစွဲကျူးလွန်နေပါက ကမ္ဘာပေါ်တွင်မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား(စစ်စစ်)ပျာက်ကွယ်
စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများ မြင်သာအောင်ပြောရလျှင် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သော မူဆယ်မြို့တွင်
ယခုအခါ တရုတ်စကားကို ၇၅ရာခိုင်နှုန်းခန့် သုံးနှုန်းနေကြသည်ကို ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာကြားမြင်နေရပါကြောင်း………..
ဆရာဇော်ဂျီ ရဲ့ ” သင်သေသွားသော် ‘ ကဗျာလေးထဲမှ တစ်ပိုဒ်ကို ကူးယူ၍ နိဂုံးချုပ်ပါအံ့…….
ကြီးပွားတိုးမြင့်၊ကျန်ကောင်းသင့်၏ ။………….ဆိုသကဲသို့ ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ကြပါစို့..ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျား…………….
ကျွန်ုပ်တို့ရွာ(မန်းဂေဇက်)တွင်လည်း ၄င်းဟိုမရောက်ဒီမရောက်စကားများကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်
အသုံးပြုနေသောသူတစ်ယောက်၏ ပို့စ်၊ကွန်မန့်များကို ကျွန်ုပ်ထွန်းပြောင် မျက်စိမှောက်ဖတ်မိပြီး..
အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်အား ဂုဏ်ပြုချင်စိတ်ပေါက်လာသောကြောင့် ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဂုဏ်ပြုခွင့်တောင်ခံထားပါသည်….
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်မှာ အခြားသူမဟုတ် …စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများ အလွန်တရာရင်းနှီးလှသော
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ၄င်းဟိုမရောက်ဒီမရောက် ဘာသာစကားကိုကို အမည်နာမတပ်ပြီး ဂုဏ်ပြုရသော်..
” ဖွတ်ကျား language ” ဟူ၍ ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်……….
စာကြွင်း။ ။ ဦးဦးဖွတ်ကျားထံ ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲ ရေးသားမိသော ငမိုက်သားထွန်းပြောင်အားခွင့်လွတ်ပါရန်……………
တိန်………..ဒီလိုလဲ ဂုဏ်ပြုလို့ ရတာပဲ ကို။ ဟိ….. ဟိ……..
ဟိ… ဆင်ခြင်မှ… ဆင်ခြင်မှ…
ဒါက ဂလိုရှိပါတယ် ကိုထွန်းပြောင်။ ဂဇက်ရွာကြီးဟာ ဆိုရင်ဖြင့် ဒီမိုရွာဖြစ်သည်နှင့်အညီ ရွာသူား အချင်းချင်း အခုလိုလူမြင်သူမြင် ၀က်ပေ့ခ်ျတခုမှာ ရင်းနှီးခင်မင်ပွင့်လင်းဖော်ရွေသောသဘောနဲ့ ဟာသမြောက်သော ကွန်မန့်တွေပေးကြသလို အတည်အခန့်ကွန်မန့်များလဲ ပေးခွင့်ရှိတာကြောင့် ကာယကံရှင် သဘောတူနေသရွေ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမထိခိုက်သရွေ့ အဆင်ပြေပါဒလယ်။ သဂျီးကိုယ်တိုင်လဲ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမမှန်ရင် ပို့စ်တင်ခွင့်မရှိ ကွန်မန့်ရေးခွင့်မရှိလို့ မပြောထားတာကြောင့် ရွာ့လူငယ်လူကြီးအများစု အလျဉ်းသင့်သလို စကားမပီယောင် ရေးကြပြောကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုထွန်းပြောင်ဂုဏ်ပြုချင်ရင်ဖြင့် အဘပုမှအစ သဂျီးအလယ် အူကြောင်းအဆုံး ရွာသူားအားလုံးစုံအောင် ဂုဏ်ပြုသင့်ပါဂျောင်း။ :smile:
အောက်မှာ မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ပက်သက်ပီး ၀ိုင်းပြော.ဆွေးနွေးထားတာလေး
တယောက်မန့်ထားတာလေးလည်း သဘောကျလို့ ပြန်ကူးရေးလိုက်ပါ၏..။
pooch says:အနီးစပ်ဆုံး ခုလက်ရှိကို ပြောရရင် “ကြောက်လိုက်တာ” ကို ” ကြောက်ထှာ” လို့ သုံးတော့လည်း စီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်နေတာပဲလေ။
ကနဦး သုံးပြတဲ့သူရှိတော့လည်း နှစ်သက်သူများက လိုက်သုံးရင်းနဲ့ ဒီအသုံး မတွင်ကျယ်လာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲ ။ ဘာသာစကားဆိုတာ ဒီလိုပဲ ကူးလူးယှက်နွှယ် ရောနှော ပေါင်းစပ်ပြီး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတာပဲလေ။(ပြောရရင် ကိုယ်ကတောင် စွန့်ဦး တီထွင်သူဖြစ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်)
အဲ့ဒီတော့ အစဉ်အဆက်က သူ့ဟာလေးနဲ့ သူ တီထွင်ပြီးသုံးလာခဲ့ကြတာပါ။
ကိုအမတ် ကျမကို အချွန်နဲ့ မသွားတယ် ။ နောက်တာပါ။ အဲ့ဒီ လင့်လေးကို သွားဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်လိုက်ပါ ကိုထွန်းပြောင်။ ပြန်ရှာတင်ပေးတဲ့ ကိုအမတ်ကို သိုင်းကျုး ။
“ လူခင် မူပြင် ” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးများ တွေ့ မိကြသလားကွဲ့ 
ဘိုးဘိုးပေ က အတက်ကြီးပြီ ဆိုတော့ မှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်နေလို့ ပါနော
မိခင်စကားများကို ဖျက်စီးခြင်းမဟုတ်ပါချင့် …အဲ အဲ
စကားမပီကလာပီကလာ ချစ်စဖွယ်ပြောဆို ခြင်းဟုသတ်မှတ်ပါသောကြောင့် …
အဲဂလို နောက်ပြောင်ပြောဆိုမိခြင်းအား ဂုဏ် ပြု ဖွယ် ကိစ္စရပ်တစ်ခုဟု ထင်မှတ်ပါလျှင်လည်း ..
နောက်နောင် ရှောင်ကျဉ်နိုင်အောင်သတိထားပါမည် ဆိုသည့်အကြောင်းးး :sad:
ရှင် …. :om:
ဘာပြောရမှန်းတောင် …အသိတော့ ၀ူးးးးးးး အဲ အဲ … မသိတော့ဘူး …. ဟီး
ကထွန်းပြောင်ရဲ့ စေတနာကို နားလည်ပေမယ့် …….. အခုလို ရေးကြတယ် ဆိုတာကလည်း … မိခင် ဘာသာစကားကို .. ပျောက်ပျက်အောင် လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ကြတာ မဟုတ်သလို ၊ စာလုံးပေါင်းမသိလို့ … အသုံးလုံး မကြေခဲ့လို့ အမှားတွေချည်း တသီကြီးရေးကြတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး ။
မွမ်းကြပ်လွန်းလှတဲ့ … အလုပ်ခွင် ၊ လှူမှူ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရောက်နေရပေမယ့် … အွန်လိုင်းယူဆာ အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှုအတိုင်းတာတစ်ခုအရ ၊ နောက်ရင်း ပြောင်းရင်း …. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစိတ်ထည့်ပြီးရေးကြတာမျိုးပါ … ။ ကိုယ့်စာပေ ပျောက်စေချင်တဲ့ သဘောမျိုးလို့တော့ လှေနံ ဓါးထစ်မမှတ်စေလိုပါ …. ။ ဘ၀ကို အပြုံးရယ်မရှိ တသမတ်ထဲ သွားမယ်ဆိုလျှင် အရမ်း ငြီးငွေ့စရာကောင်းနေမလားပဲ ….
ကိုကိုပြောင်ထောက်ပြ မှတော့ သများတို ဆင်ခြင်ရမှာပေါ့အေ… နောာာာာာာာာာ
ဒါပေမယ့် ကိုကိုပြောင် သများတို. သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း စနောက်ပြောနေကြတာပါ…. တကယ် မြန်မာလူငယ်တွေ မြန်မာလူမျိုး မြန်မာစာကို ချစ်ကြပါတယ်ဗျာ…. အခု ဂျီတော့မှာ ဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာစာရနေတော့ နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို မြန်မာလိုပဲ ပြောကြရအောင်ကွာ တဲ့…. ကဲ
ကိုထွန်းပြောင် ရဲ.စိုးရိမ်စိတ်ကို လဲ လေးစားမိပါတယ်…. ဒါပေမယ့် အဲဒါ အပျော်သက်သက်ပါ ပျော်ကနေ အပျက်ဖြစ်မသွားအောင်တော့ ကျွန်တော်တို. ဂရုစိုက်ရမှာပေါ့လေ…….
ဟုတ်ပါတယ်ချင့် အပေါ်က တိုက်ပုလေး ပြောသွားသလိုပဲ
အချင်းချင်း ခင်လို့မင်လို့ နောက်ပြောင်ရင်းကနေ ရင်ထဲက မွန်းကြပ်မူတွေ
ဖြေကြရင်း ဒီလို အရေးအသားအသုံးအနှုန်းလေးတွေ ဖြစ်သွားရတာပါချင့် … အဲ … ရှင့်
ကိုထွန်းပြောင်ရဲ့ စေတနာကိုလည်း နားလည်မိပါတယ် ရှင့်
ချစ်သောမောင်ပြောတာကိုလည်း ထပ်ဆင့်ထောက်ခံလိုက်ပါတယ် ချင့် … ခွိခွိ
တိုက်ပုဆိုတော့ RC ပေါ့နော်………… ခြံနဲ.၀င်းနဲ.ဆို ဈေးတော်တော်ရမှာနော်…. :hee:
ဒါဆို သူများလည်း အဆင်သင့် တိုက်ပုလေးပေါ်မှာ တက်နေလိုက်မယ် ……. ဟဲ ဟဲ ဟဲ
ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီကနေ ဆင်ခြင်သုံးနှုန်းသွားကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်…….
ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှူ့ တွေဟာ ခေတ်နှဲအမျှ ပြောင်းလဲနေ ကြတယ်လို့ ကျွန်တော် တော့ထင်တာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဘုရင်ခေတ်က ဘာသာစကား ပြောဆိုမှူ့ ပုံစံ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်မှာမပြောတော့ တာကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘွားတွေ ဘာသာစကား ကိုမထိန်းသိမ်း ခဲ့လို့ လို့အပြစ်သွားတင်ရင် ကျွန်တော်တို့ လွန်မယ်ထင်တာပဲ။
အမှန်အတိုင်းပြောရင်တော့ အဲလို နောက်ပြောင်ပြီး ပြောရတာကို သဘောကျပါတယ်… ဒါပေမယ့် စာရေးပြီး ပို့စ်တင်ရင်တော့ စာလုံးပေါင်းအမှန်တွေနဲ့ တင်စေချင်ပါတယ်…
အခုခေတ်ကလေးတွေ မြန်မာစာကို စိတ်မ၀င်စားတော့ဘဲ ဘယ်လိုဖြေဖြေအောင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံတွေကို မြင်နေရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..မြန်မာစာက ဘယ်လောက်လေးနက်လည်းဆိုတာ သူတို့သိဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင် ကောင်းမလဲ မသိဘူး…
. :om: :harr:
ပြဌာန်းတဲ့သူက စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါတယ်
နောက်ပြီး ကျုပ်တို့ မြန်မာ စကားမှာ
အများကညီရင် “ ဤ ” ကို “ ကျွဲ ” လို့ ဖတ်လဲ မျက်စိမှတ် ကျွဲလိုက်ကြတာပဲမလား
ဒီလိုလုပ်ရအောင်ဗျာ ဒီအဆိုကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရင် မကောင်းဘူးလား…..
အားလုံးသော စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများနှင့်တကွ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြကုန်သော
ရွာသူ/သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျား ……ကျွန်ုပ်ထွန်းပြောင်သည် မြန်မာစာကို အမှန်တကယ်တက်ကျွမ်း
နားလည်သောကြောင့်မဟုတ်ပဲ .. ဖတ်မိ မှတ်မိ ကြားမိသည်များကို အခြေခံ၍
အတည်ရေးတဲ့အခါမှာလည်း အတည်ပေါက်နဲ့ စကားလုံး မှန်မှန်သုံးပြီး ရေးလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ။
နောက်တီးနောက်တဲ့ ပေါဒဲ့အခါလည်း နောက်တီးနောက်တဲ့ ပေါက်လိုက်ဂျဒါဘော့ဂျာ ….
အဲ့လိုပေါ့ .. အဲ့ဂလိုပေါ့ …
ကျုပ်ကတော့ဖြင့် ဘာမှသိဘူး …..
ဒါက ဒီလိုရှိ့ပါတယ်..ဟိုဟာက ဟိုလိုရှိ့တာပေါ့…ကျန်တာတွေကတော့..ပေါင်ထားတယ်.(ဘော်လုံးရှုံးလို့)…ခု့ခေတ်ကလေးတွေ ဆိုသလိုပေါ့..အဲ့ဒါ ဘူလေးလဲ…ဟေ့..အဲ့ဒါ ဘူလေးလဲ….
( ဤမည်သော ကာလသည်ကား ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ် ပွင့်ထွန်းတော်မူပြီးသည်မှ ပရိနိဗ္ဗာန အလွန်တော်
ရည်တွက်လေသော် နှစ်ပရိစ္စေတ နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်ခဲ့လေပြီးတည်း )
( ဤသောဘဒ္ဒကမ္ဘာကြီးဝယ် အန်ကောင့်အေဘယ်လ် ( ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့ ) ပမာဏ များမျောင်စွာတို့
စည်ပင်သာယာဝပြား ကြက်ပျံမကျ စည်းကားသိုက်မြိုက်ခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းတို့ကြောင့် အနိစ္စတို့သည် လည်းကောင်း သင်္ခါရ တို့သည်လည်းကောင်း ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်း သဘောတို့သည် လည်းကောင်း အဲ့ဘ်စလုတ်တလီ )
မန်ဘာတစ်ယောက်အနေနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု့ကို ကန့်ကွက်ပါတယ်
ပထမ ပိုစ့်လေးကို အရမ်းကြိုက်တယ် ဒီလူတော်ရန်ဂေါ လို့ ချီးကြူးပါမိပါတယ်
စကားမစပ် အဲ့သည် ဖွတ်ကြားလမ်းကိုကွေ့လိုက်လို့ ဗမာစာကြီး ယောက်ယက်ခတ်သွားပြီးလား
ယောက်ယက်ခတ်တာရယ် ပျာယာခတ်တာရယ် ဘယ်လိုအဒိဒ်ဘယ်ရသလဲ ရှင်းပြဘာအုန်း
( လွပ်လပ်စွာ ကွဲလွဲတာကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ် )
အမျိုးဂုဏ် ထိမ်းသိမ်းခြင်းသဘောတွက် လေးစားမိပါတယ်
မမြဲသော သဘော သင်္ခါရသဘောကို မသိနိုင်တဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်ကို အလွန်သနားမိပါတယ် :D
အထူးဆိုခြင်တာက စာရေးသူရဲ့ စာရေးခြင်းဉဏ်ပညာကို အလွန် လေးစားပါတယ်
စိတ်ထဲ တယ်မချန်းမြေ့တုချေဘူး အမောင်ထိပ်ပျောင်
တစ်ဖက်သော သူနှယ် တတူနှယ်တဲနယ်တတူနှယ်တဲနှယ်
မောင်ဂီ့ ဂုဏ်တော် ကြီးကို ( စားပြီးနားမလည် :harr: )
ကိုအောင်ပု လို့ပဲ ရင်းနှီးနှီးခေါ်ပါရစေဗျာ…..
ကျွန်န်ုပ်ထွန်းပြောင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်နေခြင်း မဟုတ်ပါခင်ဗျာ…
တွေးမိတာလေးကို ရွာသူ/သားတွေလည်း အမှတ်တရဖြစ်နေစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး
ဦးဒဿဖွတ်ကျား နာမည်ကို ယူသုံးမိလိုက်တာပါ…….
ကျွန်ုပ်ထွန်းပြောင်၏ စာအရေးအသား မပြေပြစ် မချောမောမှုကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို
ထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီကွန်မန့်လေးနဲ့ပဲ တောင်းပန်လိုက်ပါရစေ………
ကျွန်ုပ်ထွန်းပြောင်မှာ ယခုအခါ အသက်ရွယ်အားဖြင့် ၂၆ နှစ်ရှိပါပြီခင်ဗျား ….
ကျွန်ုပ်ထက်( ကြီးသော၊ငယ်သော) ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်
ကျွန်ုပ်နှင့် သက်တူရွယ်တူလူကြီးမင်းများအပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်ထွန်းပြောင်မှ တစ်စုံတစ်ရာ
မှားယွင်းမိသည်ရှိသော် ခွင့်လွတ်ပေးကြပါရန် အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါသည် ခင်ဗျား..
ဦးလေးဖွတ်ကျားနဲ့ ဦးလေးထွန်းပြောင် အသက်ချင်းကအတူတူလောက်ပဲ …….. မှန်တာပြောရင် စိတ်ဇိုး (အဲလုပ်ပြန်ပြီ) စိတ်ဆိုးမှာလား ……. အပျော်အပျက်သဘောမျိုးနဲ့ရေးတတ်တဲ့ ဦးလေးဖွတ်ကျား စာတွေက တစ်ခါတစ်လေ ဖတ်လို့ကောင်းသလို အပြင်မှာ ပါးစပ်က သူ့စာလေးတွေကို ပြောရတာ အရသာရှိသလိုပါပဲ … သူပြောနေကြ စိတ်ထိခိုက်ပါတယ်ဆိုတာကို စိတ်ထိခယက်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့ စကားလေးတွေက ဗန်းစကားလိုဖြစ်သွားတယ် …. တစ်ခါတစ်လေတော့ ဦးလေးဖွတ်ကျားက အဲလိုစကားတွေ တအားရေးရင် မြန်မာစာလုံးပေါင်းကို မနည်း မြန်မာလိုပြန်နေရတာနဲ့ တော်တော်တော့ ခေါင်းစားခဲ့တာလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ် …. ဟဲ ဟဲ အူးလေးကတော့ သမီးကိုပြောတော့မယ် ၀က်သားဒုတ်ထိုးသည်လို့ ……. ပြေးပြီ ….
အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ စိတ်ကအရင်းခံပါတယ်။ တဦးနဲ့တဦး ချစ်ခင်လို့ ကြေနပ်စွာစနောက်နေကြတဲ့မေတ္တာအရင်းခံတဲ့မိသားစုပြောနေတဲ့စနောက်ပြောနေကြတဲ့စကားကို သွေးမတော်သားမစပ်အပြင်တစိမ်းလူတယောက်က ကြားသွားရင်တော့ဖွတ်ကြားစကားတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့မေတ္တာအရင်းခံနဲ့ပြောနေတဲ့သူအချင်းချင်းမှာတော့ ပီယ၀ါစာလို့ပဲ ထင်မှတ်ကြပါလိမ့်မယ်။
ရှေးတုန်းက သန်းနိုင်သီချင်း “ဂစ်တာ ကစားရင် လူတွေ သိပ်အထင်သေး ကြတယ်” က စလို့ “မြန်မာသီချင်းကြီးထဲ ရှာပါ မူရင်း အစစ်ကို ဂရင်ဂျီ ဘုန်းတော် တီးလုံးတွေ တွေ့လိမ့်မယ်” လို့ သီဖွဲ့ခဲ့တယ်။
အခုတော့ လဲ သူ့ခမျာ ရှေးရိုးကြီး ဖြစ်ပြီး ရက်ပ်တို့၊ ဟစ်ပ်ဟော့ပ် တို့ ဖြစ်ပြန်ရော။
အရီးတို့ ခေတ်က စကပ် ကို အတိုမဟုတ်ဘူးနော်။
အရှည်ဖားဖားဝတ်တာ ကိုဘဲ သရုပ်ပျက် သလို အပြောခံရတာ။
အခုများတော့ မပြောချင်တော့ဘူး လို့ တောင် အော်ရမလို။
ဒီတော့ အချုပ်ပြောရရင် ဒီလို ယဉ်ကျေးမှု တွေ၊ အမူအကျင့် အပြောအဆို တွေက ဟိုဟိုဒီဒီ အချိန်နဲ့လိုက် ပြန့်နေတာ တားမရပါဘူး။
အခု မင်းပြောတဲ့ ဘေဘီတော့က် က အခုမှ တော့ ထ ပေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
အရင်ကထဲ က အင်တာနက် ဆိုတာကြီး မနက်ခင် ကထဲက အရီးတို့ လဲ ကိုယ့်ရင်းနှီးသူ အချင်းချင်း ဘေဘီတော့က် နဲ့ နောက်သလို ချစ်စနိုး ပြောလေ့ ရှိတယ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကလေးတွေ စကားမပီကလာပီကလာ ပြောသံလေးက ချစ်စရာ မို့ နေမှာပါ။
အဲဒါ ကို ပြန်အတုယူတာပေါ့။
ဒါက မြန်မာမှာတင် မဟုတ်။
အင်္ဂလိပ်လို ပြောရာမှာလဲ ဘေဘီတော့က် ကို သုံးကြတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီ ဘေဘီတော့က်ဟာ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုတောင် ဖြစ်နေလောက်တယ်။
LOLcat ဆိုတာ ဘေဘီတော့က် language တစ်ခု ဘဲ။
ဒီ အတွက် တမင်တောင်ကျင့်ကြရတာ။
အသံထွက် အမှားတောင် မဟုတ် ဂရမ်မာ အမှားတွေပါ ရေးတာ။ (I am အစား I is )
Test 1: an teh ppl wen2teh pien tre and seds “o hai. we luvs ar pien tre!!!1!” srsly.
ကဲ သူတို့ ဘာပြောနေတာလဲ။ ဖတ်နိုင်လား။
အဖြေ က အောက်မှာကြည့်။
Ans1: The people went to the pine tree and said, “Oh hi. We love our pine tree!” Seriously.
Ans2: Hello, I like pie.
Ans3: Can I please haveapiece of pie?
Ans4: Can I haveacheese burger ?
မယုံရင် ဒီ link တွေကို ကြည့်ပါ။
ဒီလို စကားတွေ သုံးလို့ ရှိပြီးစာတွေ၊ ခိုင်မာပြီးစာတွေ ပျက်မသွားလောက်ပါဘူး။
အဲဒီ အပျော်စာတွေ နေရာမှာသာ အသစ် တွေ ဝင်လာမှာပါ။
ဒီ အတွက် တော့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
မြန်မာစာ ကျောင်းသင်ရိုးသာခိုင်မာဖို့ လိုရင်း ပါ။
အဲဒါ မခိုင်ရင်တော့ ဒီလို စကားတွေ မပေါ်ပေါ်ပေါ် မြန်မာစာ ပျက်မှာ မုချဘဲ။
အခု တောင် မြန်မာပြည်မှာနေပြီး အင်တာနက် မသုံးနိုင်တဲ့ ကလေးတွေ မှာ မြန်မာစာ အမှား တွေနဲ့။
သင်ခန်းစာကို အသေအချာမသင်ရလို့ ဖြစ်ရတာ။
သင်တဲ့ဆရာမှာရော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဘယ်လောက် ကျွမ်းကျင်နေလို့လဲ။
ဒါကမှ ပြသနာ မောင်ထွန်းပြောင်ရေ့။
ဒီတော့ ရှေးထုံးကိုလဲ ပယ်စရာမလိုပါဘူး။
အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှု အတွက်တီထွင်တာ တွေ ကိုလဲ မတားစကောင်းပါဘူး။
တီထွင်မှု (cre8ion = creation) ဆိုတာ မပြတ်တမ်း ရှိနေသင့်ပါတယ်။
မဟုတ်ရင် အင်တာနက် ဆိုတာ ရှိခဲ့မှာတောင် မဟုတ်ဘူး။ နော။ :smile:
မောင်ဂီ ဘက်က လိုက်ပြောတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါ။
အရီး အရီးပြောတာ ကြိုက်တယ်….
ွှ့Thus, ပလပ် ၀မ်း..Rဇာနည်
‘ပျော်ပျော်နေ သေခဲ’ ဆိုလို့ ပြုံးနေရတာကြိုက်သည်…. :ha:
ဟယ်တော့…. ကထွန်းပြောင်ပို့စ်ထဲ …….. အူးမိုက်ကြီးလာပျော်နေတယ် … ခွိခွိ
သိချင်ရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ စစ်တမ်းကောင်ကြည့်ပါလို့ပဲ ပြောပါရစေဗျာ…..